VIDEO:- Ciidamada Nabad-Sugidda oo Howlgal Ku soo Qab-qabtay Rag lagu tuhmayo Shabaabnimo - iftineducation.com
iftineducation.com – Howlgalka xasilinta Muqdisho ee ay sida gaar ah uga fulinayaan caasimadda ciidammada hey’adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaranka Soomaliyeed, ayaa ka socda Muqdisho, iyadoo shalay si gaar ah howlgallkaasi uu uga dhacay baraha koontaroollada ah ee laga soo galo magaalada.
Ciidammada Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya, ayaa howlgalkan ka fuliyey Koontroolka Afgooye laga aado lagana soo galo, iyadoo ciidammada ay si gaar ah u baarayeen dadka iyo gaadiidka, dadweynaha, kuwa rakaabka iyo xamuulka, ciidammada ayaa su’aallo weydiinayey dhammaan dadka baaritaannada marayey.
Sidoo kale ciidammada Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, ayaa gacanta ku dhigay inta ay socdaan howlgallada baaritaannada ah rag ciidammada Sirdoonku ay bar garteen, kuwaas oo loo gudbiyey xarumaha dambi baarista ee Ciidammada Sirdoonka Qaranka, saraakiisha qaar ayaa sheegay in la ragga la qabtay qaarkood ay ka soo horeysay xog ay soo gudbiyeen shacabka Soomaaliyeed kaddibna loo gudbiyey baaris.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka oo la hadlayey Warbaahinta Qaranka, ayaa yiri “Ciidammada Nabad-Sugidda wax ay sii laba jibaareen howlgallada Muqdisho lagu xasilinayo oo wijiyo kala duwan soo maray haddana so xowli ah uga socda Muqdiso iyo daafaheeda, waa ayna sii socon doonaan, si ay u dhammaan kuwa nabad-diidka ah ee shacabka Soomaaliyeed gumaadka u geysanaya.
Ninkaan sida Uu fanaanada u galay Daawo Muxuu mudan yahay -Muuqaal